Fanambarana momba ny valanaretina Pesta | | www.primature.gov.mg
Fanambarana momba ny valanaretina Pesta
Notontosaina teny Mahazoarivo ny sabotsy 30 septambra 2017 ny fivoriana tsy ara-potoana nandinihina sy nakana fepetra entina hifehezana sy hanafoanana ny fitrangan’ny aretina pesta. Nitarika ny fivoriana ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governamanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier. Nandray anjara ihany koa ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka Andriamanarivo Mamy Lalatiana, ny Minisitry ny fanatanjahan-tena Andriamosarisoa Jean Anicet, ny Minisitry ny Rano, ny Angovo ary ny Akoranafo Rasoloelison Lantoniaina, ny solontena maharitry ny UNICEF, Elke Wisch, ny OMS Charlotte Faty Ndiaye, ny PNUD Violet Kakyomya.
Misy eto Madagasikara ny valanaretina pesta, ary misy ny antsoina hoe “peste pulmolaire urbaine”. Azo atao tanteraka anefa ny misoroka ny aretina rehefa voatsabo ara-potoana ny olona tratrany, ary tsy maintsy miara-dàlana amin’izany ihany koa ny fampiharana ny fepetra hisoroana ny valanaretina pesta. Miompana tanteraka amin’izany ny asa sy ny ezaky ny Governemanta. Manana anjara feno amin’izany ezaka izany ihany koa anefa ny isan-tokantrano sy ny isam-batan’olona, ary ny ambaratongam-pahefana rehetra.
Niresaka tamin’ny mpanao gazety ny Praiministra Mahafaly Solonandrasana Olivier tao aorian’ny fivoriana, ary nanazava ny momba ny valanaretina pesta sy ny antony mampihanaka azy, ary dia nambarany ihany koa ireo fepetra rehetra noraisina.
Najoro ny “Cellule de veille”, rafitra manara-maso mba hifehezana faran’izay haingana ny valanaretina pesta;
Avy amin’ny parasy entin’ny ny vaolavo ny aretina pesta. Voasariky ny faritra misy fako sy loto ny voalavo ary dia mihanaka ny parasy entiny;
Misy ny fanentanana atao eto Antananarivo sy any amin’ny tanana rehetra manerana ny Nosy. Hatao ny fampahafantarana momba ny fisehon’ny aretina pesta, sy ny tsy maintsy hanantonana ny tobim-pahasalamana fa tsy hanao dokotera tenany satria mitera-doza izany;
Raha ny tranga niseho farany teto Antananarivo, dia mpanazatra eo amin’ny lalao basket-ball avy any Seychelles no hita fa matin’ny “peste pulmolaire” rehefa natao ny fitiliana. Tapaka fa tsy azon’ny besinimaro atrehina ny lalao basket eo amin’ny fiadiana ny tompon-dakan’ny CCCOI. Etsy andanin’izany dia narahi-maso sy nanaovana fitiliana avokoa ireo mpilalao sy mpanazatra rehetra.
Tapaka fa atsahatra aloha ny hetsika famoriam-bahoaka mba hisorohana ny fihanaky ny valanaretina, mba ahazoana mifehy azy tsara;
Rehefa mitranga ny fahafatesan’ny olona mararin’ny pesta dia tokony hanaiky ny toromariky ny dokotera ny fianakaviany;
Hamafisina ny fizaham-pahasalaman’ireo olona izay mivoaka sy miditra eto Madagasikara, eny amin’ny seranam-piaramanidina; hisy tahaka izany ihany koa eny amin’ny tobin’ny taxi-brousse
Hanao ezaka manokana ny Fitondram-panjakana mba ahazoan’ny SAMVA maka ny fako eto amin’ny tananan’Antananarivo mba hisian’ny fahadiovana. Tokony hanaja izany fahadiovana izany koa anefa ny isan-tokantrano, ary atao izay tsy hisian’ny fako sy poti-tsakafo misarika ny voalavo.
Misy ny tetibola entina iadiana amin’ny pesta eo amin’ny lafiny fitsaboana, sy ny fanabeazana momba ny fahasalamam-bahoaka. Ny tanjona dia ny hananan’ny tobi-pahasalamana fanafody hatrany.
Ankoatra izay, rehefa misy ny trangan’na valanaretina tahaka izao, dia tsy maintsy atao ny “Déclaration d’urgence” eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena; izany koa dia mba ahazoan’ireo mpiara miombon’antoka manampy ny Fitondram-panjakana eo amin’ny andraikitra sy ny asa izay efa natombony.
Nambaran’ny solontenan’ny OMS fa misy ny fitaovana famandriham-boalavo izay sady mamono ny voalavo ary koa ny parasy entiny. Ireo fitaovana ireo dia ho aparitaka araka izay maha-faingana azy.
Tokony ho tony ny vahoaka ary hanaja ny toromarika rehetra momba ny fisorohana ny valanaretina, sy ny fanantonana ny tobim-pahasalamana raha misy ny tranga. Ny Fitondram-panjakana dia amperin’asa, miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka mba hamongorana ny valanaretina pesta. Misy andraikitra lehibe raisina ihany koa eo amin’ny lafiny serasera, ary manan-toerana lehibe amin’izany ny mpanao gazety.
← Fitokanana fotodrafitrasa roa tany Antsohihy, faritry Sofia
Fanampim-panazavana avy amin’ny Lehiben’ny Governemanta mahakasika ny fivoaran’ny aretina pesta →
Primature – Office National de Nutrition: 100 tonnes d’aliments thérapeutiques pour les enfants du Sud
Journée Nationale de la Nutrition : « Investir dans la prévention de la malnutrition chronique, garant d’un capital humain pour un développement social et économique durable »
Lancement officiel du Programme d’appui à la réforme et à la sécurisation foncière